Partial Discharge Measurement Device Manufacturers |China Partial Discharge Measurement Device Suppliers & Factory
Iyo GDPD-414 Inotakurika Partial Discharge Detector inotora Smart Kurumidza kungwara simba bvunzo system, uye inotakurika yemunharaunda discharge yekuongorora chishandiso chekurarama chakakwira voltage insulation michina.
Iyo GD-610C iri kure ultrasonic partial discharge detector inoshandisa ultrasonic spectrum probe (sensor) kuunganidza ultrasonic masaini uye kuongorora ruzha rwezviratidzo kuti uongorore zvikanganiso, idhizaini yekuongorora tsaona yemutsetse wekugovera.
Partial Discharge Online Monitoring System yeGIS
Gas-insulated metal-enclosed switches (GIS) uye gas-insulated metal-enclosed transmission lines (GIL) ndeimwe yemidziyo yakakosha mumagetsi emagetsi.Vane mabasa maviri ekutonga nekudzivirira.
Chikamu Dicharge Online Monitoring System yeJenareta
Kazhinji, kubuda kwechidimbu kunoitika panzvimbo iyo zvinhu zve dielectric zvinhu hazvisi yunifomu.
GDJF-2006 Digital Partial Discharge Detector inoshandiswa zvakanyanya kuona kubuda kwechikamu chemagetsi emagetsi emagetsi akadai semagetsi ekushandura, chiridzwa chekushandura, HV circuit breaker, Zinc oxide surge arrester, tambo yemagetsi.Iyo zvakare inogona kuita bvunzo dzemhando uye yekutarisa mashandiro ekudzivirira.
GDJF-2007 Digital Partial Discharge Analyzer inoshandiswa zvakanyanya kuona kubuda kwechikamu chemagetsi emagetsi emagetsi akadai semagetsi emagetsi, chiridzwa chekushandura, HV circuit breaker, GIS, Zinc oxide surge arrester, tambo yemagetsi.
GDJF-2008 Partial Discharge Detector iri kuyera kubuda kwechikamu kune zvigadzirwa zvakaita sema transformer, mutual inductors, HV switch, zinc monoxide zvinosunga uye tambo dzemagetsi.Iyo zvakare inogona kuita bvunzo dzemhando uye yekutarisa mashandiro ekudzivirira.
The GDPD-414H handheld Partial Discharge Detector inoshandisa smart quick intelligent power test system (Soft No. 1010215, trademark registration number 14684481), iyo inogona flexibly configurate siyana masensa maererano zvakasiyana bvunzo zvinhu.
GDPD-306M Inotakurika Ultrasonic Partial Discharge Detector
GDPD-306M inoshandiswa zvakanyanya mukuonekwa kwechikamu chekubuda kwemasisitimu emagetsi.Kusanganisira high voltage switchgear, ring mains, voltage/current transformer, transformer (inosanganisira yakaoma type transformer), GIS, mitsara yepamusoro, tambo, uye zvimwe midziyo yekuvharisa mamiriro ekuonekwa.
GDPD-3000C Inotakurika Ultrasonic Partial Discharge Detector inoshandisa advanced cloud computing uye otomatiki modelling tekinoroji kuti iwane kuyerwa kwechiratidzo chekuburitsa, kurekodha, kutapurirana, kuchengetedza, kuongorora uye kuchinjanisa, ichipa rutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi hwekuyera pasaiti yekubuda.